As DK New Media na-eme nnyocha na ikike ọdịnaya atụmatụ anyị mepụtara maka ndị ahịa anyị, enwere usoro metụtara isiokwu anyị na-ewepụta, ọdịiche anyị na-amata, na ihe ndị ka mkpa anyị na -emepụta. Nke mbụ ụfọdụ nkọwa:
Kedu ihe bụ ụtụ isi?
Ontụ ụtụ - usoro nhazi ọkwa nke abụọ nke ụkpụrụ ụlọ nke saịtị ahụ.
N'ime ebe nrụọrụ weebụ gị na usoro ọdịnaya gị, nke a bụ ụdị - nke a maara dị ka nchịkọta - nke isiokwu ndị dị ka. Gbanye Martech Zone, anyị nwere edemede dị ka nchịkọta, ahia email, ahia ahia, ahia mmadu, ahia ahia na ndi ozo. Anyị mepụtara ụtụ isi ahụ ka ọ bụrụ ihe na-emetụta ndị na - agụ akwụkwọ anyị yana ịhazi ọdịnaya anyị nke ọma ka igwe nyocha wee nwee ike nyochaa saịtị anyị nke ọma, na-amata ihe isiokwu bụ isi nke saịtị anyị.
Kedu ihe bụ Ontology?
Ojiji - nkewa nke isiokwu maka ebumnuche mmadụ ebe a na-anọchi anya data na-enweghị isi na mmekọrịta bara uru, nke metụtara ya.
N'ime usoro weebụ gị na usoro ọdịnaya, nke a bụ otu ị ga - esi tinye posts na edemede gị. Akụkụ niile, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịnwe ahịa puku afọ ga-ejikọtara na atụmatụ ndị a. Yabụ anyị na-ahụ na anyị na-akpado isiokwu ahụ nke ọma ka mmadụ wee nwee ike ịchọ wee chọta isiokwu ha na-achọ gafee usoro isiokwu.
Inwe usoro ihe eji eme ihe nke oma na nke a haziri ahazi iji kpoo ihe omuma nke oma gha hazie ihe omuma gi karia ndi na agu gi. Eledala ihe ọ na-eme anya! Ọ na-enye aka na nchọta ime obodo na isiokwu ndị metụtara ya na saịtị gị yana… idebe ndị ahịa itinye aka ogologo oge na inyere ha aka ịbịaru ha nso na ntụgharị.
Gịnị bụ lexical Onomies?
Xkọwapụta A kọwara ya dị ka ma ọ bụ metụtara okwu ma ọ bụ usoro okwu nke asụsụ. Onodu bụ iwu ma ọ bụ iwu metụtara okwu. Isiokwu ọ bụla ị na-eche maka ide ga-enwe okwu metụtara ya nke ndị ọbịa na ndị ọrụ injinị ihe na-eji. A maara ndị a dị ka lexical onomies.
Gịnị bụ 5 Lexical Onomies
Okwu ochichi - okwu yiri nke a na-eji maka otu isiokwu ahụ. Otu ihe atụ na saịtị a nwere ike ịbụ okwu ahụ "infographic". Ndị mmadụ na-akpọkwa ha “Infographs”, “Infograph graphics” na “Informational Graphics”. Nchọgharị ọchụchọ na-ahụkarị ọgụgụ isi gbasara okwu ndị ọzọ, mana ọ bụghị mgbe niile. Choputa okwu dika okwu ma jiri data ichota ihe ichoro kacha ewu ewu.
Antony - okwu mmegide ma ọ bụ dị iche iche metụtara isiokwu ahụ. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịnwe edemede maka omume kacha mma nke ịre ahịa email, anyị nwekwara ike ịnwe akụkọ gbasara omume kacha njọ nke ịre ahịa email. Ọ dị mkpa ka anyị dee maka ma maka na ndị ọbịa na ndị ọrụ nchọta ihe nchọta na-achọ ha abụọ.
Hygwọ - ọpụrụiche okwu metụtara isiokwu ahụ. N'ime nchịkọta enwere ọtụtụ okwu dịka nsụgharị nsuso, njikwa mkpọsa, nkewa, ihe nzacha, wdg.
Meronymy - ndị otu isiokwu niile. Ibe weebụ bụ HTML, CSS, scripts, embeds na ihe oyiyi. Onye nke ọ bụla bụ onye otu ma ọ bụ akụkụ nke ibe weebụ yabụ mgbe anyị na-ede banyere imewe weebụ ma ọ bụ mmepe, anyị kwesịrị ịmara onye ọ bụla so na ya ka ọdịnaya anyị were kpuchie isiokwu ahụ.
Holonymy - dum nke isiokwu nwere okwu nwere n'okpuru ya. Hashtag, URL dị mkpụmkpụ, onye ọrụ twitter, na ozi bụ akụkụ niile nke Tweet. Anyị nwere ike ikwu maka nke ọ bụla n'adabereghị, mana ọ dị mkpa ka anyị tụlee ya niile yana akụkụ ya.
Chere na ịmechara, nri? Ọbụnadị nso. Ugbu a akọwapụtara ụtụ isi na njiri mara, ọ dị oke nkụ na ị ghasaa nchịkọta na isiokwu niile wee chọọ isiokwu metụtara ya iji dee maka ya. Easyzọ dị mfe iji mee nke a bụ naanị ịjụ ajụjụ - onye, ​​ihe, ebee, mgbe, ihe kpatara ya na olee otu.
Dịka ọ gbasara ahịa ọdịnaya na blọọgụ anyị, na isiokwu enyere m nwere ike mebie ya ọtụtụ ajụjụ ma ọ bụ isiokwu. Ka anyị jiri ihe atụ dịka ahịa efu ma eme ka m bụrụ ụlọ ọrụ na-eme ozi ederede.
Onye bu ahia m mobile ndị asọmpi? Ndi bu ahia ahia ọkachamara Enwere m ike ịchọ ịgba ajụjụ ọnụ?
Gini bu okwu ndi eji ahia mkpanaka? Kedu ihe nyiwe azụmaahịa mkpanaka nwere ike inyere m aka? Kedụ ụdị nloghachi na azụmaahịa azụmaahịa m nwere ike nweta yana azụmaahịa ekwentị?
Ebee ka m nwere ike ịga gụkwuo banyere azụmaahịa mkpanaka? Ebee ka ọnụ ọgụgụ, infographics, whitepapers, demonstrations, na vidiyo m nwere ike idozi ma kesaa banyere azụmaahịa ekwentị?
Kedu mgbe bụ ihe omume ịzụ ahịa mkpanaka, nzukọ, ma ọ bụ webinars nke m nwere ike ịga, kwuo okwu na, ma ọ bụ kwado? Kedu mgbe enwere ọnọdụ ụfọdụ metụtara azụmaahịa ekwentị?
Gini mere ahia mkpanaka di nkpa nye ndi ahia? Kedu ihe kpatara ndị ahịa ji emebi ahịa ahịa ekwentị?
Kedu ka m ga - esi wepụta usoro omume kacha mma gbasara azụmaahịa ekwentị? Kedu ka ndị ahịa ekwentị na-eme nke ọma? Ego ole bụ ngwa ahịa ekwentị?
E nwere ọtụtụ narị ajụjụ ndị ọzọ mana ị nwere ike ịmepụta ọdịnaya zuru oke nke na-ekpuchi isiokwu ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ site na taxonomy, ontology, na lexical onomies metụtara ngwaahịa na ọrụ gị.
Na-esote bụ ime nyocha nke ọdịnaya gị, chọpụta ọdịiche ahụ, chọta ọdịnaya na-asọmpi nke na-eme maka ndị asọmpi, dozie ọdịnaya gị na ịhazi kalenda ọdịnaya gị!
Chọọ ma melite ọdịnaya nke ịdegoro na isiokwu ụfọdụ ka ị zuo oke - ma ọ bụ chọọ ide ọdịnaya nke gafere ọdịnaya onye asọmpi gị nke na-emeri nsonaazụ ọchụchọ ugbu a. Nke ahụ nwere ike ịchọ ịme usoro ndị ọzọ dị ka ịmepụta vidiyo, infographics, whitepapers, ọmụmụ ikpe na pọdkastị gbasara isiokwu ahụ.
Chọrọ mmalite ngwa ngwa nyocha gị? Lelee Zaa Ọha
Tags: zaa ohanezeNtughariantonymyHolonymyHyponomyududolexical onomiesMeronymyihe omumuMmekọrịtasynonymyụtụ ụtụ